IHuawei Watch GT3 kukungcwaliswa kwefomula eyimpumelelo [Uhlalutyo] | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | elektroniki, ngokubanzi, Reviews, SmartWatch
Iimpahla zokunxiba zisefashonini, ngaphandle kwento yokuba azikhange zigqibe ukuqalisa, kwiminyaka yakutshanje, ngaphandle kokumiswa okubangelwa ngubhubhane, ezi wotshi zikrelekrele ziye zaba ngumbulelo odumileyo kwimisebenzi yazo engenakubalwa kunye nokuphuculwa komsebenzi wazo. Kule meko IHuawei kudala inika ezinye zezona zikhetho zibalaseleyo kwintsimi yee-smartwatches, kwaye iya kuqhubeka isenza njalo.
Sihlalutya iHuawei Watch GT 3 entsha ifakwe njengophuculo lwenguqulelo yangaphambili kwaye igcina ukuzinikela kwayo okuqinileyo kwiHarmony OS. Sihlalutya iHuawei smartwotshi yamva nje kunye nenamandla ukuza kuthi ga ngoku, sifumane nathi.
1 Uyilo olubonakalayo noluyimpumelelo
3 Iinzwa kunye nosetyenziso olwahlukeneyo
4 Uqeqesho, ukusetyenziswa kunye nokuzimela
Uyilo olubonakalayo noluyimpumelelo
Kule meko iHuawei ayifuni ukuphuma kwiicanon zayo malunga newotshi ehlakaniphile, igcina inkalo yewotshi yemveli kude lee kunezinye iibrendi ezifana neApple kunye neXiaomi eziyifunayo. Sinebhokisi ezimbini, 42,3 x 10,2 millimeters kunye 46 x 10,2 millimeters ngokuxhomekeke kwiimfuno zethu. Iwotshi iya kuba nobunzima obumalunga ne-35/43 grams ngaphandle komtya, kwaye ivakala isulungekile kwaye yakhiwe kakuhle, kwaye isiko lophawu lwaseTshayina. Kwimeko yomzekelo ohlalutyiweyo, iquka intambo yesikhumba emdaka kunye necala lensimbi engenasici kwindalo yayo, intle kunye nombala ohlukeneyo.
Iinguqulelo: 42 kunye 46 millimeters, zemveli kunye «ezemidlalo»
Imibala: Igolide, iRose Gold, intsimbi kunye noMnyama.
Iintambo: iMilanese, i-silicone, isikhumba kunye nentsimbi.
Ukwaleka ngeCeramic ngasemva
Kulo mba sele sisazi ukuba sinenguqu enesandla sesibini kwisakhelo okanye yendabuko ngokuxhomekeke kwimodeli ekhethiweyo kunye nemilinganiselo yesikrini. Kufuneka kukhankanywe, ukwenzela ukuba singadibanisi umfundi, ukuba sihlalutya inguqu ye-46-millimeter kunye nentambo yesikhumba esimdaka kunye ne-casing yendabuko yensimbi. Ngokombono wam, umlindo ugcina imilinganiselo emihle, uyilo olungenakuguqulwa kunye nemvakalelo yokuguquguquka kunye nobuhle obubalulekileyo, inokukukhapha ukuya kwisiganeko esisemthethweni kunye ne-gym, into emele uyikhumbule xa usenza ukuhlawulwa kwezi mpawu.
Kule meko, uHuawei ukhethe i-ARM Cortex-M, ngaphandle kokuphumeza ngale ndlela iiprosesa zokwenziwa kwazo ezo sizazi kakhulu. Ezi ziindaba ezimnandi kuba zigxininisa ukuguquguquka kweHarmony OS, kodwa isenza sizibuze ngekamva leeprosesa zohlobo lwaseAsia. Ngokubhekiselele kwimemori ye-RAM asinalo ulwazi oluthile, sinayo malunga ne-4 GB yokugcina iyonke, eyaziwa ngokuba yi "ROM".
Imakrofoni edibeneyo yokuthatha iminxeba
Sinewotshi enonxibelelwano Isizukulwana se-5.2 seWiFi kunye neBluetooth XNUMX ngoko ke sinoluhlu olubanzi lwamathuba angenazingcingo. Asinalo eli xesha (ewe kwimodeli yangaphambili) lukubanakho ukudibanisa i-eSIM okanye ikhadi leSIM elibonakalayo, ngoko uya kuba nokuxhomekeka ngokupheleleyo kwifowuni. Isixhobo siyahambelana neHarmony OS, i-Android 6.0 ukuya phambili kunye ne-iOS 9.0 ukuya phambili, iyenza ibe yindlela eguquguqukayo enokuthi, nangona kunjalo, ingasivumeli ukuba sinxibelelane nezaziso ezingaphandle kweHuawei / Honor ngokulula nangokukhawuleza. .
Iinzwa kunye nosetyenziso olwahlukeneyo
CInokuba ngenye indlela, le Huawei Watch GT 3 izuza ilifa uluhlu olulungileyo lwezinzwa, ngaphaya kweemonitha zesantya sentliziyo yakudala kunye nemitha ye-oxygen saturation yegazi, uHuawei ufune ukujika le Watch GT 3 ibe yenye yezemidlalo ngaphandle kokuphulukana nayo nantoni na, kuba konke oku kulandelayo kuya kuhamba nathi :
Inzwa yobushushu bomzimba (iya kwenziwa kuhlaziyo oluzayo).
Inzwa yoxinzelelo lomoya (barometer).
Konke oku ukongeza kwiinkqubo zokulinganisa ezichanekileyo zendawo apho i GPS, GLONASS, Galileo kwaye kunjalo QZSS kuzo zonke iinguqulelo zayo. Iimpawu zobugcisa ngaphaya kwesikrini kunye nokuzimela kwabelwana ngobungakanani obuhlukeneyo kunye neenguqulelo. Kwaye le yindlela esiqhubela phambili ngayo ukuthetha ngesikrini.
I-46-millimeter version (evavanyiweyo) ibonisa ipaneli AMOLED de I-1,43 intshi emele ukukhula okuncinci xa kuthelekiswa nenguqulo yangaphambili, kunye nesisombululo se-466 × 466 ngaloo ndlela inika ubuninzi be-pixel ye-326PPI. Ngokwenxalenye yayo, sinesisombululo esifanayo kwinguqulo ye-42-millimeter, ngoko ubuninzi be-pixel bonyuka ukuya kwi-352PPI, inkcukacha ukusuka kwindawo yethu yokujonga ingabonakali phakathi kwenguqulelo kunye nenye.
Uqeqesho, ukusetyenziswa kunye nokuzimela
Ngokumalunga nokwenza ngokwezifiso ngaphakathi kwe I-AppGallery sifumana inkqubo yeHuawei ngaphezu kwe-10.000 yemimandla ekhutshelweyo, Uninzi lwazo lukhululekile, nto leyo eya kwenza kube nzima kuwe ukuba ungafumani enye oyithandayo. Ine-bezel ejikelezayo ephuculweyo, kunye neqhosha lokunxibelelana kwiprofayili ngoku inochuku olukhululekile kunye nokuhamba ukusuka kwindawo yethu yokujonga.
Kweli candelo uHuawei usithembisa ngeTrueSeen 5.0+ ukuchaneka okukhulu kwimilinganiselo yoqeqesho, kwaye inyani yeyokuba iimvavanyo zethu bezithandeka, zibonisa iziphumo ezinokuthelekiswa nezinye iindlela zokugqibela ezifana neApple Watch okanye iGalaxy Watch, yonke into ebulela kwiifoto zayo ezisibhozo.
Ukuphuculwa kwe-algorithm ye-AI kunye nomda wokutenxa we-5LPM.
Izaziso malunga nokubetha kwentliziyo engaqhelekanga.
Umncedisi welizwi odibeneyo.
Ngaphandle kokusinika idatha echanekileyo kwi-mAh, inkampani yase-Asia isithembise iintsuku ze-14 zokuzimela esingakwazi ukuzifumana, siye sahlala phakathi kwe-11 kunye neentsuku ze-12 ngokusetyenziswa rhoqo. Kwimiba emininzi efana nesicelo kunye nolawulo lwedatha, ujongano lomsebenzisi kunye namava ethu ngokubanzi ngayo, iwotshi ayikanikezeli mahluko ungako kunye noguqulelo lwangaphambili olufanayo, kwaye le yeyona ngongoma ilungileyo ukuba sithathela ingqalelo ukuba benziwe bagqibelela. Konke oku kusondezwe ngexabiso ukusuka kwi-euro ezingama-249 kuguqulelo lwe-46-millimeter kunye ne-euro ezingama-229 kuguqulelo lwe-42-millimeter, Amaxabiso alungelelaniswe ngokuzimeleyo ngokusekwe kubuchule bawo, ngokukodwa ukulungelelaniswa komgangatho wexabiso lomlinganiselo ekunzima ukuwungqamanisa kwicandelo. Kwi-329 siya kuba nenguqulo ye-titanium obukho bayo eSpain ayaziwa okwangoku.
Bukela i-GT 3
Uyilo olusulungekileyo kakhulu
Igcwele itekhnoloji kunye nezinye iindlela, ngaphandle kokunqongophala kwezinzwa
Umthamo omkhulu wokwenza ngokwezifiso
Kufuneka siqhelane ne-bezel ejikelezayo
Ujongano lomsebenzisi lunoveli kangangokuba lufuna ukufunda
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » IHuawei Watch GT3 kukungcwaliswa kwefomula eyimpumelelo [Uhlalutyo]
I-Tesvor S4, isicoci esipheleleyo serobhothi kuluhlu oluphakathi [Jonga kwakhona]